बलात्कारका घटना किन रोकिएनन् ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
बलात्कारका घटना किन रोकिएनन् ?
२०७५ बैशाख १४, शुक्रबार ११:०५ गते
– जोन कँडेल
हिजोआज दिनहुुँजसो बलात्कारका घटना भइराखेका छन् । बलात्कारका समाचारले पत्रिकाका पेज भरिएका छन् । रेडियो, टेलिभिजनमा पनि बलात्कारकै समाचार बजेका छन् । त्यतिमात्रै होइन, सामाजिक सञ्जाल पनि यही समाचारले ढाकिएका छन् । बलात्कारीको आरोपमा मानिसहरु प्रहरीद्वारा पक्राउ नभएका पनि होइनन् । कतिपय घटनाका दोषीहरु जेल सजाय भोगिरहेका छन् । तर पनि बलात्कारका घटनामा भने अझै पनि कमी आउन सकेको छैन । अनुपातमा झ्न बढ्दो छ ।
आखिर किन हुन्छ बलत्कारका घटना ? कानुन कमजोर भएर कि दोषीलाई उचित कारबाही नभएर ? चेतनाको कमी अथवा चेतनालाई प्रयोगमा नल्याएर ? यो अध्यनको विषय बन्ला । तर, यसले समाजलाई चिन्तित बनाएको छ । बालिकादेखि शिक्षित युवती तथा वृद्धाहरुमा अझै पनि असुरक्षाको भय उत्तिकै छ । घरबाहिर निस्केकी छोरी समयमा घर नआइपुग्दा परिवारमा चिन्ता हुन थालेको छ । कामका लागि अरुको घरमा बसेका छोरीहरु बलात्कारको शिकार हुन पुगेका छन् । परीक्षा दिन गएकी छोरीको मृत शरीर घर आउने अवस्था सृजना भएको छ ।
बलात्कारको अर्थ एक निरीह महिलामाथि हुने यौनहिंसामात्रै होइन, आफ्नै श्रीमती पनि यौन सम्पर्क गर्न राजी हुँदिनन् र त्यो अवस्थामा यौन सम्पर्क गरिन्छ भने त्यो पनि बलात्कार हो । अझ भनौँ– असहमतिमा, प्रलोभनमा, जबर्जस्ती गरिने यौन सम्पर्क नै बलात्कार हो । नेपालको सन्दर्भमा आधुनिकता र फेसनका नाममा पहिरिने छोटा कपडा पनि बलात्कारको प्रमुख कारण बन्न गएको छ । समुदायको हिसाबमा पीडित संख्या मुस्लिम समुदायमा कम हुनुले पनि यो कुरालाई प्रस्ट पार्दछ ।
युवावस्थाका करिब १८ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका युवतीहरु प्रायः छोटो कपडा लगाउने र छोप्नेभन्दा धेरै देखाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दो देखिन्छ, जसका कारण विपरित लिङ्गीलाई आफूतिर आकर्षण गर्न सहयोग गर्छ । फलस्वरुप, दिमागमा नकारात्मक असर पर्न जान्छ, जसको कारण असहाय बालबालिका एवम् वृद्ध महिलाहरुमाथि नै यौन दुव्र्यवहार हुने गरेको पाइन्छ । जो अर्धनग्न छ उही बलात्कारको शिकार हुने होइन, अर्धनग्न शरीरको कारण त्यसको असर अन्यत्र देखिने हो । जस्तोः त्यसको असर जो कमजोर छ उसैमाथि देखिन्छ । वृद्ध र बालिकामाथि देखिन सक्छ । शतप्रतिशत नै त नहोला, तर नारी पोशाक र शृंगारको असर पक्कै पनि हुन्छ र छ पनि । हेलमेट नलगाएर केही व्यक्तिको दुर्घटनामा मृत्यु हुन्छ, तर सबै मोटरसाइकल सवार व्यक्तिलाई हेलमेट लगाउन अनिवार्य गरिएको हुन्छ । त्यसैले, यस्ता कुरामा पनि आमनागरिक सचेत हुनैपर्छ । हाम्रो परम्परा, धर्म, संस्कार, सामाजिक बनावट र शिक्षा (सिकाइ)ले तुरून्त पश्चिमेली संस्कार र सभ्यतालाई अँगाल्ने सामथ्र्यं राखेको हुँदैन ।
यौनलाई जटिल रुपमा हेरिएकै कारण बलात्कार र यौनहिंसाका घटना धेरै भएका हुन् भन्ने तर्क पनि आउने गर्छन् । नेपाली समाजमा यौन शिक्षाको अभाव र यसलाई लाजको विषय बनाइएको हुँदा पनि यौन जटिल बनेको देखिन्छ । यौन खासै केही होइन, दैनिक जीवनको आवश्यकता हो भनेर यौनलाई सहज रुपमा लिने पनि गरिन्छ । त्यसैको असरले डिभोर्स (सम्बन्धविच्छेद) र एबोर्सन (गर्भ तुहाउने)जस्ता गतिविधि बढ्दो देखिन्छ । सहरी क्षेत्रमा यौन शिक्षाबारे धेरै जानकारी भएकोले बलात्कारका घटनामा केही कमी त देखिए । तर, सम्बन्धविच्छेद र गर्भ तुहाउनेजस्ता समस्या झनै मौलाएको हो कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्ता सामाजिक कुरामा पनि सबै सजग हुनु आवश्यक छ ।
हामी व्यवहारमा आधुनिकता खोज्छौँ, तर त्यो आधुनिकता स्वीकार गर्न मानसिक रुपमा तयार भैसकेका हुँदैनौँ । यसका कारण विभिन्न किसिमका दुर्घटनाहरु हुन पुग्छन् । आफूलाई स्वघोषित आधुनिक ठान्दै गर्दा हाम्रो संस्कार र परम्पराको मर्यादा साथै समाज र परिवारको धारणामा पनि परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक हुन्छ । बालिकाहरुलाई छाडेर उमेर पुगेका महिलाहरुमा जुन खालका घटना हुने गरेका छन्, त्यसमा पुरूष मात्र दोषी नभएर स्वयम् महिलाहरु पनि दोषी हुने गरेको कुरा समाजले औँल्याउन थालेको छ । एउटा अपरिचित अथवा परिचित भए पनि कुनै ठोस काम नभएको बखतमा पनि पुरूषले जहाँ बोलायो त्यहीँ जाने, समयको ख्याल नराख्ने, होटल, जंगल अथवा कुनै नयाँ ठाउँमा पुरूषसँगै घुम्न जाने, सामाजिक सञ्जालमा चिनेकै भरमा सजिलै विश्वास गरेर भेटघाट गर्नेजस्ता क्रियाकलापले पनि बलात्कारीहरुलाई सजिलो भएको छ ।
यो कुरामा अहिले समाजमा महिलाहरुले विशेष ख्याल पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । यसको शिक्षा महिला अधिकारकर्मीहरुले समाजमा दिन ढिला गर्नुहुँदैन । अहिले बेरोजगार नै भए पनि युवावर्गको लवाइखवाईमा पश्चिमेली मुलुकको सभ्यता प्रवेश गरेको छ । अर्धनग्न देखिने फेसन, अश्लील चलचित्र, अश्लील सामग्री राखिएको मोबाइलको बढ्दो प्रयोगका कारण पनि बलात्कारीहरुलाई सजिलो भएको कुरा एक अध्ययनले देखाएको छ । लागूऔषध दुव्र्यसनी र मदिराको खुला बिक्रीवितरणको कारणबाट पनि बलात्कार र यौनहिंसाका कारण बन्न पुगेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा हुने टिप्पणी, महिलाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघसंस्थाका केही थान विज्ञप्ति र कहिलेकाहीँ माइतीघरदेखि बानेश्वर वा भद्रकालीदेखि शान्तिवाटिका वा वसन्तपुरसम्मका ¥याली, अनि महिलामाथि हुने बलात्कारलगायतका हिंसा अन्त्य गर्न प्रमुख दलका नेता तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र पेस गर्ने र प्रभावितलाई सुरक्षित आवासमा लगेर राख्ने काम हुने गरेका छन् । यसले महिलाका मुद्दामा बोल्ने र यस्ता घटनामा परिहाले जाने ठाउँ र साथ दिने समूह छन् भन्ने भरोसा महिलालाई दिएको छ । तर पनि यस्ता कार्यक्रम मौसमी बन्दा त्यति प्रभावकारी भएको देखिँदैन ।
आपसी समझदारीमा कुनै होटलमा बसेर यौन सम्पर्क गर्ने जोडीलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिन्छ । तर, बलात्कारी खुलेआम हिँडिरहेका हुन्छन् । यौन शिक्षा मात्र होइन, कति देशमा यौन व्यवसाय पनि सञ्चालनमा छ्न । बलात्कारको न्यूनीकरण गर्न हाम्रो देशमा त्यो पनि आवश्यक छ कि यो समयसापेक्ष र मागको आधारमा बहस गर्ने विषय बन्न सक्छ । नेपालमा बलात्कारविरूद्धको कानुन पर्याप्त भएको छैन । र, कानुन निर्माण प्रक्रियामा संलग्नहरुको सामाजिक, राजनीतिक चासोको विषयका कारण ठूलो र निरन्तरको आन्दोलनपछि पनि कमजोर कानुन निर्माण भएको छ । त्यसैले, अझै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, फेरि पनि बलात्कार हुनुमा महिलाको नै दोष र महिलाको नै बेइज्जती हुन्छ भन्ने मान्यताका कारण उनीहरुको घटना दर्ता नै नहुने, भए पनि दोषी पत्ता नलाग्ने, दोषी पत्ता लागे पनि आवश्यक प्रमाण नपुगेको भनेर छुट्ने वा पीडितले स्वयम् नै बोली फेर्नेजस्ता समस्या विद्यमान छन् ।
बलात्कारका घटनामा शून्य सहनशीलता अपनाउन र यस्ता घटनामा मिलापत्र गराउनेहरुलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउन बेलाबेलामा निर्देशन भए पनि प्रभावकारी देखिँदैन । कानुनअनुसार जाने हो भने पीडितको उमेर र अवस्था हेरेर ५ देखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, यो पनि कम हो भन्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् । बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि नउठेका होइनन् । त्यो बहसको विषय बन्ला । तर, बालबालिका र वृद्धाको हकमा पीडकलाई आजीवन जेल सजाय हुनैपर्छ । युवायुवतीको हकमा भने पीडितको अवस्था हेरी कडाभन्दा कडा सजायको प्रावधान आवश्यक छ ।
पछिल्लो समय नेपाल सरकारले बलात्कारविरूद्धको कानुनमा केही परिमार्जन ग¥यो, जसअनुसार बलात्कारका घटना दर्ताको समय सीमितता ३५ दिनबाट बढेर ६ महिना पु¥याइएको छ । यो महिलाले आफ्नो जीवनमा जुनसुकै समयमा भएको बलात्कारको जहिले पनि मुद्दा दर्ता गर्न पाउने नियम ल्याउनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका अनुसार नै हुनुपर्छ । यति धेरै बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा हरेक युवायुवती सचेत हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ आत्मरक्षाको उपाय अवलम्बन गर्न सक्नुपर्छ । बलात्कारको प्रयास भएमा जीवनरक्षाका लागि उसको हत्या गरेमा कानुन नलाग्नेसमेत व्यवस्था छ । हरेक युवायुवती आत्मरक्षाको लागि शारीरिक रुपमा सबल बन्नैपर्छ ।
यो नेपालको मात्र होइन, विश्वकै साझा समस्या हो । वन्डरलिस्टका अनुसार सन् २०१७ मा सर्वाधिक बलात्कार र यौन अपराध भएका १० देश र क्षेत्रमा डेनमार्क, फिनल्यान्ड, जिम्बाबे, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड, भारत, इंग्ल्यान्ड, अमेरिका, स्वीडेन र दक्षिण अफ्रिका पर्छन् । यौनजन्य घटना विकसित देशमा झन् बढी देखिन्छ । हाम्रो समाज सभ्य कहिले बन्ने ? हामीले विकसित मुलुकबाट आएका सभ्य कुराको पाठ कहिल्यै सिकेनौँ । तर, छाडा संस्कृतिलाई भने अहिलेका सामाजिक अपराधमा लागेका युवाहरुले सजिलै सिक्न थाले । र, यसैको कारण पनि समाजमा बलात्कारका घटना बढ्न पुगेको देखिन्छ ।
यसलाई रोक्न सबै तह र तप्काका जिम्मेवार व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरु लाग्नुपर्दछ । राज्यको कानुन अपराधी उम्कन सक्ने खालको हुनुहुँदैन । अपराधीलाई सामाजिक मिलापत्रमा उम्किने वातावरण पनि बनाइनु हुँदैन । अनिमात्र, बलात्कारका घटना न्यूनीकरण हुन सक्छन् । आत्महत्या गर्ने र बलात्कार गर्ने मनस्थितिमा पुग्ने व्यक्तिको मनोविज्ञानका बारेमा माइक्रो अध्ययन पनि आवश्यक छ ।